Golaha Midnimada iyo Badbaadada Soomaaliyeed oo ka soo horjeestey hadalkii Geeddi...
.....wuxuu goluhu cambaareynayaa hadalkaas qeyru mas’uulinmada ah ee lagu baab’inaayo xuquuqda aayo ka talinta dadka Soomaaliyeed ee wali ku jira gacanta gumeystaha....
Golaha Midnimada iyo Badbaadada Soomaaliyeed wuxuu aad uga xunyahay, wax layaab lehna ku noqotay in Cali Max’ed Geedi oo mas’uuliyad Qaran sheeganaya uu war-baahinta Caalamka (British Broadcasting Corporation, 11/11/2005) ka sii daayo hadal ay ku inkirayo, ku dafirayo xaqiiqada qadiyadda aaya ka talinta gobalada Soomaaliyeed ee wali ku jira gacanta Gumeysiga laga soo bilaabo 15-kii November 1884 shirkii ka dhacay Baarliin (Scramble of Africa) ilaa hadda.
Sidaas owgeed wuxuu goluhu cambaareynayaa hadalkaas qeyru mas’uulinmada ah ee lagu baab’inaayo xuquuqda aayo ka talinta dadka Soomaaliyeed ee wali ku jira gacanta gumeystaha.
Hadaba wuxuu goluhu ku war galinayaa bulshada Caalamka inuusan Cali Max’ed Geedi wakiil Soomaaliya uga ahayn hadalka uu warbaahinta siiyay Taariikhdu markii ay ahayd 11/11/2005 ee ku saabsaneyd qadiyadda Gobalada Soomaaliyeed ee la gumeysto uuna warkiisu yahay mid shakhsi ah oon qadiyadda Soomaaliyeed waxba ka bedeli kareyn, wuxuuna goluhu Bulshada Caalamka ka dalbanayaa inay taageeraan, oy garab iyo gacanba siiyaan ummadaha la gumeysto oo u dagaalamaya xaq aayo ka talintooda.
Dhanka kale wuxuu Goluhu ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inay la socdaan kana dhiidhiyaan dhagarta socota oo ah in Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ee xorta ahayd 45 sano ka hor loo kala qayb-qaybinayo 6 meelood taasoo looga gol-leeyahay in lagu baab’iiyo midnimada ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkana la hoos geeyo caddowgeeda.
Ugu dambeyntii waxaa ummadda Soomaaliyeed looga fadhiyaa iney meel iska dhigaan khilaafyadooda ma dhaleyska ah ee dhexdooda ah oy meel uga soo wada jeestaan midnimadooda iyo difaaca qaranimadooda.
Xuseen Siyaad Qoor-Gaab oo ah xoghayaha golahaasi oo qoraal saxaafaadeedkaasi golaha kaddib la hadlayay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in goluhu uusan mar dambe ogolaan doonin hadalka kasta oo ka soo yeera qof Soomaaliyeed ha noqdo mas’uul ama yuusan noqon oo kala dhantaalaya midnimada Ummadda Soomaaliyeed.